घरबारविहीन बाढी पीडितलाई भेट्न चाहँदैनन् चुनावी अभियानमा रहेका नेता - Marganugami Daily
Marganugami Daily Breaking Headline1 National घरबारविहीन बाढी पीडितलाई भेट्न चाहँदैनन् चुनावी अभियानमा रहेका नेता
घरबारविहीन बाढी पीडितलाई भेट्न चाहँदैनन् चुनावी अभियानमा रहेका नेता
सप्तरी,१९ भदौ । वैशाखमा श्रीमान् बिते, साउन अन्तिम साता आएको बाढीले घर बगाइदियो । न ओत लाग्ने घर छ, न खाने अन्न नै । दुई अबोध सन्धान छन्। कसरी भरणपोषण गर्ने चिन्ता छ उनलाई। ‘विपत्तिको पहाडजस्तै भएको छ यो जिन्दगी,‘ २८ वर्षीया अनिता सदाले भनिन, ‘अबोध छोराहरुको मुख हेरेर मर्न पनि सकिँदैन, तर बाँच्न पनि त्यत्तिकै गाह्रो छ ।
‘सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–४, कोइलाडीस्थित मुसहर बस्तीकी अनिताका सासूससुरा पनि छैनन् । जेठाजु र देवर छन, तर गरिबीका कारण आफ्नै परिवार पाल्न उनीहरुलाई धौ–धौ छ । बेलाबखत माइतीले सहयोग नगरेका पनि होइनन् । ‘तर माइतीकै भर कति दिन? ‘अनिता भन्छिन, ‘बाढीले घर बगाएपछि माइतीबाट बुबा र भाइहरु आएर ओत लाग्ने छाप्रो बनाइदिए, उनीहरु पनि गरिबै छन, कहिलेसम्म मेरो जिम्मेवारी धान्नु । ‘सोही बस्तीकी ७० वर्षीया सोमनीदेवी सदा बाढीका कारण घरबारविहीन भएकी छन् ।
सोमनीका श्रीमान् बितेको एक दशक बढी भयो। उनका दुई छोरा छन, तर अलग्गै बस्छन् । वृद्ध आमाको उनीहरुलाई कुनै मतलब नभएको स्थानीय बताउँछन् । सोमनीले भनिन, ‘एउटा सानो झुप्रो थियो, त्यहीँ बसेर जसोतसो जीवन निर्वाह गर्दै आएकी थिएँ, तर बाढीले त्यो झुप्रो पनि बगाइदियो । ‘बाढीका कारण यसै बस्तीका ५ वर्षीय कमलु सदाको ज्यान गएको थियो ।
कमलुको शव गाड्ने ठाउँसमेत नभएर उनको परिवारले कोसीको भेलमा बगाएका थिए । साउन अन्तिम साताको बाढीले सिंगो तिलाठी–कोइलाडी गाउँपालिका नै डुबानमा प¥यो । बाढीप्रभावित जिल्ला सप्तीमा यतिखेर चुनावी अभियान तीव्र छ । रंगिबिरंगी पर्चा–पम्प्लेट, टिसर्ट, तुल तथा ब्यानरले गाउँनगरका चोक र गल्लीहरु रंगिएका छन् । टोलटोलमा चुनावी बैठक भइरहेका छन् ।विभिन्न दलमा आबद्ध ठूला–साना नेताहरु आश्वासन बाँड्न व्यस्त देखिन्छन् । तर, कोइलाडीस्थित मुसहर बस्तीमा भने चर्चा र चहलपहल केही छैन । बस्तीका कुनै घरमा झण्डा पनि टाँगिएको छैन । बस्तीका कसैको जिउमा पनि दलको नाम र चुनाव चिह्न अंकित टिसर्ट देखिँदैन । ‘छैन हजुर पछिल्लो दुई सातायता कोही नेता हम्रो बस्तीमा देखिएका छैनन,‘ स्थानीय बिहारी सदाले भने, ‘जसले जिते पनि हामीलाई के? हाम्रो पीडामा सघाउने कोही छैन ।‘